လကျသညျးကြိုးခွငျးကို သဘာဝအတိုငျး ပွုပွငျကာကှယျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးလေးမြား
HomeKnowledgeလကျသညျးကြိုးခွငျးကို သဘာဝအတိုငျး ပွုပွငျကာကှယျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးလေးမြား
H November 30, 2020
လကျသညျး ကနျြးမာရေးက ခန်ဓာကိုယျ ကနျြးမာရေးနဲ့ ဆကျစပျနေ ပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျမှာ ကနျြးမာရေးမကောငျးရငျ လကျသညျး ကြိုးတာတှေ၊ လကျသညျး အရောငျပွောငျးတာတှေ ဖွဈတတျ ပါတယျ။လကျသညျးတှေ ကွှပျဆပျပွီး ကြိုးလှယျနတေယျ ဆိုရငျ လကျသညျးတှကေို သဘာဝအတိုငျး ထိနျးသိမျးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးလေးတှေ ရှိပါတယျ။
1. ဗီတာမငျ E
မီတာမငျ E က လကျသညျးခှဲကို အားဖွညျ့ပေး ပါတယျ။ လကျသညျး ကြိုးတာတှေ မဖွဈအောငျ ကာကှယျ ပေးပွီး လကျသညျးအောကျ သှေးလညျပတျမှုတှကေို တိုးတကျစေ ပါတယျ။ ဗီတာမငျ E ကို လကျသညျးပျေါမှာ လိမျးပေးရ မှာပါ။
အုနျးဆီမှာ အငျတီအောကျဆီးဒငျ့ ပါဝငျလို့ လကျသညျးထဲ ပိုးဝငျတာတှေ၊ မှိုဝငျတာတှကေို ကာကှယျပေးပါတယျ။ နှေးနတေဲ့ အုနျးဆီကို လကျသညျးပျေါတငျပွီး လကျသညျး တဈဝိုကျစိမျ့ဝငျသှားအောငျ နှိပျနယျပေးပါ။
3. ပနျးသီး ရှာလကာရညျ
ပနျးသီးရှာလကာရညျက လကျသညျးဖွောငျ့လာစဖေို့၊ လကျသညျး ရှညျလာဖို့ အတှကျ အသုံးဝငျပါတယျ။ လကျသညျးခှံ ကိုလညျး ခြောမှ့လာစပေါတယျ။ ပနျးသီးရှာလကာရညျကို ရနှေေးတဈခှကျထဲထညျ့ပွီး လကျထညျ့စိမျထားပါ။ နတေို့ငျးပွုလုပျပေးရငျ ကနျြးမာတဲ့ လကျသညျးတှကေို ရမှာပါ။
လကျဖကျဆီက လကျသညျး မှိုစှဲတာကို ပြောကျကငျးစပေါတယျ။ လကျဖကျဆီတဈမြိုးတညျးကို တိုကျရိုကျသုံးလို့မရပါဘူး။ ဆီတဈခုခုနဲ့ရောပွီးမှ သုံးသငျ့ပါတယျ။ လကျဖကျဆီနှဈဇှနျးကို သံလှငျဆီဇှနျးတဈဝကျ၊ မကျမှနျဆီ၊ အုနျးဆီတို့နဲ့ ရောပွီး လကျသညျးနဲ့ လကျသညျး တဈဝိုကျ အသားအရကေို စိမျ့ဝငျသှားအောငျ မိနဈ အနညျးငယျကွာ နှိပျနယျပေးပါ။
သံပရိုသီးမှာ ဗီတာမငျစီ ပါဝငျလို့ ကျောလဂငျြ ထုတျလုပျမှုကို မွနျဆနျစပေါတယျ။ လကျသညျးကိုလညျး ပိုကနျြးမာစပေါတယျ။ သံပရိုသီးမှာ ပါဝငျတဲ့ Alpha-hydroxy acid က လကျသညျးကို အရောငျတောကျပစပွေီး လကျသညျးကြိုးမှုကိုလညျး ကာကှယျပေး ပါတယျ။ သံပရိုသီးကို ရနှေေးတဈခှကျထဲ ထညျ့ညှဈပွီး လကျကို5မိနဈ ကနေ 10 မိနဈ ကွာအောငျ စိမျထားပေးပါ။
သံလှငျဆီက လကျသညျးကို ရဓောတျနဲ့ အာဟာရဓာတျ ဖွညျ့ပေးပါတယျ။ ပွီးတော့ သံလှငျဆီမှာ ဗီတာမငျ E လညျး ပါဝငျလို့ လကျသညျးကွှပျဆတျတာ မဖွဈတော့ပါဘူး။ လကျသညျး ရှညျလာမှုကိုလညျး မွနျစပေါတယျ။ လကျသညျးပျေါကို သံလှငျဆီ လိမျးပေးရုံ ပါပဲ။
7. ကွကျဥအနှဈနှငျ့ ပြားရညျ
ကွကျဥအနှဈမှာ ဗီတာမငျ A ပါဝငျလို့ အားနညျးပွီး ကြိုးလှယျတဲ့ လကျသညျးတှကေို ခြောမှစေ့ပေါတယျ။ ရဓောတျလညျး ဖွညျ့ပေးပါတယျ။ ပိုပွီး အာနိသငျရှိခငျြရငျ ကွကျဥ အနှဈထဲကို ပြားရညျထညျ့လို့ ရပါတယျ။ ပြားရညျက မှိုရောဂါတှကေို ကာကှယျပေးပါတယျ။ ကွကျဥ အနှဈထဲကို ပြားရညျဇှနျး တဈဝကျထညျ့မှပွေီး လကျသညျး တဈဝိုကျကို လိမျးပေးပါ။ 15 မိနဈ ကွာရငျ လကျကို ရဆေေးလိုကျလို့ ရပါပွီ။
နှမျးကွတျဆီမှာ သတ်တုဓာတျတှေ၊ အငျတီအောကျဆီးဒငျ့ ပါဝငျလို့ လကျသညျးရဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ သငျ့တျောပါတယျ။ နှမျးကွတျဆီကို လကျသညျးပျေါမှာ မိနဈ အနညျးငယျ ကွာအောငျ လိမျးပေးပါ။
မကျမှနျသီးဆီမှာ ဗီတာမငျ A, B, E ပါဝငျတာကွောငျ့ ပကျြစီးနတေဲ့ လကျသညျးတှကေို အားဖွညျ့ပေးပွီး လကျသညျးကို ခြောမှစေ့ပေါတယျ။ မကျမှနျသီးဆီကို လကျသညျးနဲ့ လကျသညျး တဝိုကျမှာ2မိနဈ၊3မိနဈကွာအောငျ လိမျးပေးပါ။
10. Jojoba ဆီ
Jojoba ဆီမှာ ဗီတာမငျနဲ့ သတ်ထုဓာတျတှေ ပါဝငျတာကွောငျ့ လကျသညျး ကြိုးတာ၊ ကွှပျဆတျတာတှကေို ကာကှယျပေးပွီး ဖွဈစပေါတယျ။ Jojoba ဆီကိုလညျး လကျသညျးပျေါမှာ2မိနဈ၊3မိနဈကွာအောငျ လိမျးပေးပါ။
လက်သည်းကျိုးခြင်းကို သဘာဝအတိုင်း ပြုပြင်ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးများ
လက်သည်း ကျန်းမာရေးက ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆက်စပ်နေ ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကျန်းမာရေးမကောင်းရင် လက်သည်း ကျိုးတာတွေ၊ လက်သည်း အရောင်ပြောင်းတာတွေ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။လက်သည်းတွေ ကြွပ်ဆပ်ပြီး ကျိုးလွယ်နေတယ် ဆိုရင် လက်သည်းတွေကို သဘာဝအတိုင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။
1. ဗီတာမင် E
မီတာမင် E က လက်သည်းခွဲကို အားဖြည့်ပေး ပါတယ်။ လက်သည်း ကျိုးတာတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ် ပေးပြီး လက်သည်းအောက် သွေးလည်ပတ်မှုတွေကို တိုးတက်စေ ပါတယ်။ ဗီတာမင် E ကို လက်သည်းပေါ်မှာ လိမ်းပေးရ မှာပါ။
အုန်းဆီမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ပါဝင်လို့ လက်သည်းထဲ ပိုးဝင်တာတွေ၊ မှိုဝင်တာတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ နွေးနေတဲ့ အုန်းဆီကို လက်သည်းပေါ်တင်ပြီး လက်သည်း တစ်ဝိုက်စိမ့်ဝင်သွားအောင် နှိပ်နယ်ပေးပါ။
3. ပန်းသီး ရှာလကာရည်
ပန်းသီးရှာလကာရည်က လက်သည်းဖြောင့်လာစေဖို့၊ လက်သည်း ရှည်လာဖို့ အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ လက်သည်းခွံ ကိုလည်း ချောမွ့လာစေပါတယ်။ ပန်းသီးရှာလကာရည်ကို ရေနွေးတစ်ခွက်ထဲထည့်ပြီး လက်ထည့်စိမ်ထားပါ။ နေ့တိုင်းပြုလုပ်ပေးရင် ကျန်းမာတဲ့ လက်သည်းတွေကို ရမှာပါ။
လက်ဖက်ဆီက လက်သည်း မှိုစွဲတာကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ လက်ဖက်ဆီတစ်မျိုးတည်းကို တိုက်ရိုက်သုံးလို့မရပါဘူး။ ဆီတစ်ခုခုနဲ့ရောပြီးမှ သုံးသင့်ပါတယ်။ လက်ဖက်ဆီနှစ်ဇွန်းကို သံလွင်ဆီဇွန်းတစ်ဝက်၊ မက်မွန်ဆီ၊ အုန်းဆီတို့နဲ့ ရောပြီး လက်သည်းနဲ့ လက်သည်း တစ်ဝိုက် အသားအရေကို စိမ့်ဝင်သွားအောင် မိနစ် အနည်းငယ်ကြာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။
သံပရိုသီးမှာ ဗီတာမင်စီ ပါဝင်လို့ ကော်လဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကို မြန်ဆန်စေပါတယ်။ လက်သည်းကိုလည်း ပိုကျန်းမာစေပါတယ်။ သံပရိုသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ Alpha-hydroxy acid က လက်သည်းကို အရောင်တောက်ပစေပြီး လက်သည်းကျိုးမှုကိုလည်း ကာကွယ်ပေး ပါတယ်။ သံပရိုသီးကို ရေနွေးတစ်ခွက်ထဲ ထည့်ညှစ်ပြီး လက်ကို5မိနစ် ကနေ 10 မိနစ် ကြာအောင် စိမ်ထားပေးပါ။
သံလွင်ဆီက လက်သည်းကို ရေဓာတ်နဲ့ အာဟာရဓာတ် ဖြည့်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ သံလွင်ဆီမှာ ဗီတာမင် E လည်း ပါဝင်လို့ လက်သည်းကြွပ်ဆတ်တာ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ လက်သည်း ရှည်လာမှုကိုလည်း မြန်စေပါတယ်။ လက်သည်းပေါ်ကို သံလွင်ဆီ လိမ်းပေးရုံ ပါပဲ။
7. ကြက်ဥအနှစ်နှင့် ပျားရည်
ကြက်ဥအနှစ်မှာ ဗီတာမင်Aပါဝင်လို့ အားနည်းပြီး ကျိုးလွယ်တဲ့ လက်သည်းတွေကို ချောမွေ့စေပါတယ်။ ရေဓာတ်လည်း ဖြည့်ပေးပါတယ်။ ပိုပြီး အာနိသင်ရှိချင်ရင် ကြက်ဥ အနှစ်ထဲကို ပျားရည်ထည့်လို့ ရပါတယ်။ ပျားရည်က မှိုရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကြက်ဥ အနှစ်ထဲကို ပျားရည်ဇွန်း တစ်ဝက်ထည့်မွှေပြီး လက်သည်း တစ်ဝိုက်ကို လိမ်းပေးပါ။ 15 မိနစ် ကြာရင် လက်ကို ရေဆေးလိုက်လို့ ရပါပြီ။
နှမ်းကြတ်ဆီမှာ သတ္တုဓာတ်တွေ၊ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ပါဝင်လို့ လက်သည်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ နှမ်းကြတ်ဆီကို လက်သည်းပေါ်မှာ မိနစ် အနည်းငယ် ကြာအောင် လိမ်းပေးပါ။
မက်မွန်သီးဆီမှာ ဗီတာမင် A, B, E ပါဝင်တာကြောင့် ပျက်စီးနေတဲ့ လက်သည်းတွေကို အားဖြည့်ပေးပြီး လက်သည်းကို ချောမွေ့စေပါတယ်။ မက်မွန်သီးဆီကို လက်သည်းနဲ့ လက်သည်း တဝိုက်မှာ2မိနစ်၊3မိနစ်ကြာအောင် လိမ်းပေးပါ။
Jojoba ဆီမှာ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္ထုဓာတ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် လက်သည်း ကျိုးတာ၊ ကြွပ်ဆတ်တာတွေကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဖြစ်စေပါတယ်။ Jojoba ဆီကိုလည်း လက်သည်းပေါ်မှာ2မိနစ်၊3မိနစ်ကြာအောင် လိမ်းပေးပါ။